स्तम्भमाथि राजाका मूर्तिहरू – Discovery4p.com
Basanta Maharjan Heritage Leaveacomment 1,064 Views
मन्दिरअगाडि प्रस्तर स्तम्भ र त्यसमाथि मानवको मूर्ति भएको पहिलो उदाहरण हनुमानढोका दरवार क्षेत्रभित्रको त्रिशुलचोकमा रहेको राजा प्रताप मल्लद्वारा स्थापित प्रस्तर स्तम्भ र त्यसमाथिका मूर्तिहरु हुन् ।
काठमाडौं उपत्यकाका मन्दिरहरू अगाडि स्तम्भमाथि भक्तजनको धातुमूर्ति राखिएको देख्न पाइन्छ । यो मल्लकालमा मात्र विकास भएको हो । यसअघि लिच्छविकालमा मन्दिरअगाडि प्रस्तरको स्तम्भमाथि गरुडको प्रतिमा राख्ने चलन रहेको देखिन्छ । मन्दिरको निर्माण वा केही थप काम गरेपछि सो व्यक्तिले आफ्नो भक्तिभाव प्रकट गर्न यसरी स्तम्भमाथि मूर्ति स्थापना गर्ने हुन् । गरुडको मुखाकृति प्रत्येक मूर्तिमा फरक फरक रहेको पाइन्छ । यसरी गरुडको मुखाकृति फरक फरक हुनुका कारण अन्यथा नभई त्यो कीर्ति स्थापना गर्ने भक्तजनले आफ्नो अन्ुहारको झल्को दिन चाहेको हुनु धेरै संभव छ । र पछि यसको विकास मल्लकालमा आएर गरुडको ठाउँमा आफ्नै मूर्ति राख्ने चलन आएको हुनु पर्छ । शुरु शुरुका केही प्रस्तर स्तम्भ र त्यसमाथिका मानव आकृतिका मूर्तिहरुबारे चर्चा यहाँ गरिन्छ ।
मन्दिरअगाडि प्रस्तर स्तम्भ र त्यसमाथि मानवको मूर्ति भएको पहिलो उदाहरण हनुमानढोका दरवार क्षेत्रभित्रको त्रिशुलचोकमा रहेको राजा प्रताप मल्लद्वारा स्थापित प्रस्तर स्तम्भ र त्यसमाथिका मूर्तिहरु हुन् । यो चोक मूलचोकको उत्तरी दलानमा रहेको ढोका वा बाहिर काकेश्वरको मन्दिर सामुन्ने रहेको सिंहढोकाबाट पुग्न सकिन्छ । यस चोकमा मल्ल राजाहरुको इष्टदेवता तलेजुको विशाल मन्दिर रहेको छ र मन्दिरको सामुन्ने रहेका तीन वटा विशाल प्रस्तर स्तम्भमध्ये सवैभन्दा अगाडि यो स्तम्भ रहेको छ । यस प्रस्तर स्तम्भमा अंकित २९ हरफको अभिलेखअनुसार राजा प्रताप मल्लले आफ्नो इष्टदेवता तलेजुप्रति आफ्नो भक्तिभाव प्रकट गर्न वि.सं.१७२० मा दुई पुत्रहरु नृपेन्द्रमल्ल र चक्रवर्तीन्द्र मल्लसहित आफ्नो मूर्ति स्थापना गरिएको हो ।
यस प्रस्तर स्तम्भमाथि रहेको सालिक वा मूर्तिमा राजा प्रताप मल्लको मूर्ति बीचमा र दायाँबायाँ दुई राजकुमारहरु रहेका छन् । सालिकहरुको अग्रभागमा साँधेको सानो प्रतिकृति पनि हरेको छ । यिनीहरु सबैले राजकीय पगडी लगाएका छन् । उनीहरुको घाँटीमा बहुमूल्य हार पनि देखिन्छन् । उनीहरु सबै नमस्कार मुद्रामा बसी भक्तिपूर्वक मन्दिरमाथि हेरिरहेका छन् ।
प्रतापध्वजया माथिल्लो भाग गोलाकारमा रहेको छ । त्यस गोलाकारभित्र लहरै मिलाएर बाघ, सिंह, बाख्रा आदि विभिन्न जन्तुहरुको उभ्याई तल जमीनमा हेरिरहेको जस्तो बनाइएको छ । चारै दिशामा सिंह र बीचको भागमा हात्ती बसी सुनको सिंहासन थामिरहेको छ । सिंहासनको चारै कुनामा चार राजकुमार र अगाडितिर दुई रानीहरुका बीच एउटा सानो अर्को मूर्ति नमस्कार मुद्रामा छन् । यी मूर्तिहरुको बीचमा अन्यभन्दा आकारमा ठूलो र नमस्कार मुद्रामा रहेकोमूर्ति स्वयं राजा प्रताप मल्लका हुन । यस प्रकार त्यस स्तम्भमा आठ व्यक्तिको मूर्ति रहेका छन् । प्रस्तरमा अंकित अभिलेखअनुसार राजा प्रताप मल्लले आफूसहित आफ्ना दुई रानी र पाँच राजकुमारहरुका मूर्ति राखिएका छन् । जहाँ पनि चित्र तथा अन्यत्र राजाको दायाँ जेठी राजी र बायाँ कान्छी रानी राखिने भएबाट यहाँ राजाको दायाँको रानी अनन्त प्रियादेवी र बायाँ रानी प्रभावतीदेवीको मूर्ति रहेको छ । पाँच जना राजकुमारहरु भूपेन्द्र मल्ल, चक्रवर्तीन्द्र मल्ल, महीपतेन्द्र मल्ल, नृपेन्द्र मल्ल व पार्थिवेन्द्र मल्लका मूर्तिहरु भने कुन कसको हो भन्ने खुट्याउने आधार प्राप्य छैन ।
यस्तै अर्को प्रस्तरको स्तम्भ र त्यसमाथिको मूर्ति हनुमानढोका दरवार परिसरमा जगन्नाथ मन्दिर र कृष्ण मन्दिरका बीच रहेको ठूलो डबलीमा रहेका छन् । यो देगुतलेजु मन्दिरको सिधै अगाडि छ । यो पनि राजा प्रताप मल्लद्वारा स्थापित भएकोले यसलाई प्रताप्रध्वज नाम दिइएको छ । स्तम्भमा अंकित ६० हरफको अभिलेखअनुसार यो प्रतापध्वज वि. सं. १७२७ भाद्र महिनामा खडा गरिएको हो । अभिलेखको उठानमा राजा प्रताप मल्ल आफैले रचना गरेको चण्डिकादेवीको स्तुति कोरिएको छ र पछि देगु तलेजुको मन्दिरमा सुनको छाना र गजूर हाली त्यसको उपलक्ष्यमा आफू र आफ्ना परिवारको मूर्ति हालिएको वर्णन गरिएको छ ।
राजा प्रताप मल्लको दायाँ हातमा अक्षमाला बायाँ हातमा हस्तलिखित ग्रन्थ धारण गरेको छ । शिरमा कल्कीसमेत भएको राजसी टोपी र गर्धनमा बहुमूल्य हार देखिन्छ । राजकुमारहरुको पकरी पनि राजाको जस्तै देखिन्छ तर कल्की भने देखिदैन । राजाजस्तै राजकुमारहरु पनि घुँडाले टेकी बसिरहेका छन् तर रानीहरु भने ललितासनमा देखिन्छ । प्रताप मल्लको शिरमाथि सर्पको फणाले गर्दा अझ शोभायमान देखिन्छ ।
तलेजु र देगु तलेजुको मन्दिर अगाडिको जस्तै स्तम्भमाथि मानवाकृत मूर्तिहरु पाटनमा देगु तलेजुअगाडि योगनरेन्द्र मल्ल र भक्तपुर राजदरवार अगाडि भूपतीन्द्र मल्लको पनि देख्न पाइन्छ । यिनीहरु प्रताप मल्लकै प्रभावमा बनाइका हुन् । प्रताप मल्लको यो स्तम्भमाथि मान्छेको मूर्ति राख्ने चलनको प्रभाव पाटन र भक्तपुरमा पर्नुअगाडि गोरखा राज्यमा परेको देखिन्छ । गोरखाको पोखरी थोकमा रहेको राजा पृथ्वीपति शाहको मूर्तिसहितको प्रस्तरको स्तम्भ यसको उदाहरण हो । पृथ्वीपति शाहको राम्रो सम्वन्ध कान्तिपुरसँग थियो ।
पृथ्वीपति शाह वि.सं. १७३५ को दशैं ताका नेपाल उपत्यकामा आई कान्तिपुरका राजा नृपेन्द्र मल्लसँग मीत समेत लाएका थिए । यसै बेला उनले राजा प्रताप मल्लसहितका मूर्तिहरु र प्रस्तर स्तम्भ देखेका थिए । यसको दुई वर्षपछि उनले पनि गोरखामा वि. सं.१७३७ को आषाढमा प्रस्तर स्तम्भ खडा गराई त्यसमाथि आफ्नो मूर्ति स्थापना गराएका थिए । वि.सं. १७४० माघमा मात्रै पाटनमा योगनरेन्द मल्लले प्रस्तर स्तम्भ खडा गराई त्यसमाथि आफ्नो मूर्ति राख्न लगाएका थिए । यसरी नै भक्तपुरमा राजा भूपतीन्द्र मल्लको मूर्ति कहिले राखियो भन्ने कुरा स्पष्ट भएको छैन । राजा पृथ्वीपति शाह कान्तिपुरमा आई मीत लगाउँदा सम्म भूपतीन्द्र भल्ल राजा भइनसकेको भन्ने आधारबाट पनि उनको त्यो मूर्ति पछि मात्रै स्थापना गरिएको हुनु धेरै संभव छ ।
Previous गुफामा गुम्बा
Next हनुमानढोेकाको काल भैरव
ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक तथ्यहरुले प्राचीन कपिलवस्तु एउटा सानो गणराज्य भएको बुझाउँछ, ‘बुद्धको दरबार’ भन्न त …